ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း l Procedures, Doctors | Bumrungrad
Please select ... Not sure. I will need the doctor's advice. ... Procedure not listed below. NON-COSMETIC SURGERY - Engorgement သို့မဟုတ် Blocked နို့ပြွန်ဆက်ဆံဖို့ Ultrasound အဘို့အ post-လုပ်ထုံးလုပ်နည်းညွှန်ကြားချက်များ - Miniopen- ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion) - pH ကိုစောင့်ကြည့်: 24 နာရီ, 48 နာရီ Capsule Bravo - Phaco နှင့် IOL (Intraocular မှန်ဘီလူး) - PVP (Prostate ၏ Photoselective ငွေ့) - Vbeam Pulse ဆိုးဆေးလေဆာနှင့်အတူသွေးကြောဆိုင်ရာအရေပြားအခြေအနေများကုသ - VMAT အသုံးပြုခြင်းဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး - ကျောရိုးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (non-ခွဲစိတ်) - စက်ရုပ်-Assisted ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့ကျောက်ကပ်ကင်ဆာခွဲစိတ်ကုသ - စိတ်ဖိစီးမှု Echocardiogram - စုစုပေါင်းဒူးအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်း - နာတာရှည်အပူပိုင်းယ်ဆယ်ရေးများအတွက်မျက်တောင် Spa - ပဲစင်းငုံ-P ကိုကို (Prostate ၏ Transurethral ဆိုင်ရာပါရဂူကျမ်းပြုစု) - လည်ပင်းရှေ့ပိုင်းမှနေ၍ လည်ပင်းရိုးဆက်ချပ်ပြားဝိုင်းဖြတ်ခြင်းနှင့် အရိုးဆစ်တွယ်ဆက်ခြင်း (ACDF) - လေဆာကုသမှု Resurfacing - အဆိုပါစောင်းစားပွဲတင်စမ်းသပ်ခြင်း - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု: ခန္ဓာကိုယ် Mass Index (BMI) - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု: စိုးအဝလွန်ခြင်း - Antenatal Class Schedule - Anterior Cruciate Ligament (ACL) Reconstructive Surgery - Arthroscopic Meniscus Treatment (အရိုးအထူးကုဒူးခွဲစိတ်ကုသ) - Arthroscopic Shoulder Surgery (Rotator Cuff Surgery) - Arthroscopy (အရိုးအထူးကုခွဲစိတ်) - Baby Delivery - Birmingham Hip Resurfacing Surgery - Botulinum Toxin Injections for the Treatment of Neurological and Movement Disorders - Capsule Endoscopy - Carotid Angioplasty - Cerebral Angiogram - Chemical Peel - Cochlear Implant Surgery - Colon Capsule - Cyst Excision - Cystoscopy - Decompressive Craniectomy - Deep Brain Stimulation (DBS) - EmbryoScope - တစ်ဦးသန္ဓေသားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြည့်ရန် - Endo-OLIF (Endoscopically assisted Oblique lumbar interbody Fusion under O-arm navigation –Spine Surgery) - Endoscopic Surgery for the Treatment of Nasolacrimal Duct Obstruction (Blocked Tear Ducts) - Endoscopic Ultrasound - Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) - Femtosecond Laser Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation (Femtosecond Laser) - Femtosecond မျက်စိပါဝါဖျောက်ပေးပါသည်နှင့်အတူ Vision ၏ပြင်ဆင်ခြင်း - Gastrointestinal Motility Planning - Gentle YAG Laser Treatment - Gynecologic Laparoscopic Surgery - Hemorrhoidectomy - Hip Replacement (အရိုးအထူးကုခွဲစိတ်) - Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) - Immunotherapy - In-vitro Fertilization (IVF) - Laparoscopic Cholecystectomy (သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောဖယ်ရှားရေး) - Laparoscopic Gastric Banding - Laparoscopic Gastric Bypass - Laparoscopic Sleeve Gastrectomy - Left Atrial Appendage Closure Using WATCHMAN - Low-dose Computerized Tomography - Micro Dermabrasion - Microneurosurgery - Nissen Fundoplication Surgery - Non-Invasive Prenatal Screening (NIPT) - Pacemaker Implantation - QS-ND Yag လေဆာနှင့်အတူဆေးရောင်စုံစက္ကူ Disorders ၏ကုသမှု - ReLEx SMILE - Sclerotherapy (ပင့်ကူသွေးပြန်ကြောကုသမှု) - Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) - Urodynamic လေ့လာ - Vascular Specific Laser Treatment - Vertebroplasty နှင့် Kyphoplasty - virtual colonoscopy (မှန် CT Scan ကို) - ကင်ဆာများအတွက်ပစ်မှတ်ထားကုထုံး - ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်မှ စစ်ဆေးချက်များအတွက် ရှင်းလင်းခြင်း - ကီမိုကုထုံး - ကလေးဘဝဓာတ်မတည့ကုသမှု - ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းအား ကုသခြင်း - ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်း - ကောင်းပြီသက်ကြီးရွယ်အိုများအားကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ် - ကျောရိုးဆစ်တွယ်ဆက်ခြင်း (Spinal Fusion) - ကျောရိုးတိုင်အတွင်းပေါက်ကျဉ်းခြင်းအတွက် အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် အာရုံကြောပိနေခြင်းအား လွတ်အောင်လုပ်ခြင်း (Endoscopic Decompression for Spinal Canal Stenosis) - ခါးနှင့်လည်ပင်းရိုးဆက်ချပ်ပြားဝိုင်းကျွံခြင်းအတွက် အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ရိုးဆက်ချပ်ပြားဝိုင်းဖြတ်ခြင်း (Endoscopic Discectomy for Lumbar and Cervical Disc Herniation) - ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောလေဆာကုသမှု - ဂယ်လီယမ်စကင် - စက်ရုပ်-Arm က Hip အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသ Assisted - စက်ရုပ်-Assisted ခွဲစိတ်ကုသ - စက်ရုပ်၏ပေါင်းစပ်အောက်မှာကျောရိုးဘေးတိုက်စောင်းကွေးခွဲစိတ်ကုသ Assisted-ကျောရိုးခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်အို-လက်မောင်း Navigation - စာဖယ်ရှားရေး, ကုသမှု - စုစုပေါင်းဒူးအစားထိုး (ဒူးခွဲစိတ်ကုသ) - ဆဲလ်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသို့မဟုတ်ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုး - ဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက် Brachytherapy (ရေဒီယိုသတ္တိကြွမျိုးစပါး) - တစ်ဦးအင်ဆူလင် Pump များနှင့်ဂလူးကို့အာရုံခံတွေနဲ့ဆီးချိုရောဂါထိန်းချုပ်ခြင်း - ဓာတ်ကင်ခြင်း - နယူးစက်ရုပ်သွားသင်တန်းနည်းပညာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအမြန်နှုန်း - နှလုံးလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုစစ်ဆေးခန်း (EP Lab) - နှလုံးလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုလေ့လာခြင်း - နှလုံးသွေးကြောစီတီရိုက်ခြင်း - နှလုံးသွေးကြောဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း - နှလုံးသွေးကြောဖြတ်ဆက်ခြင်း (CABG) - နှလုံးခွဲစိတ်ခြင်း - နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ (CKD) အတွက်ဆေးဝါးနှင့် ကုသမှုများ - နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါကုသခြင်းအစီအစဉ် - နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ (CKD) လူနာများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ - ပန်ကရိယနှင့် သည်းခြေအိတ်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း (ERCP) - ဘေရီယမ်အရည်ထည့်သွင်းစစ်ဆေးခြင်း - ဘော်လုံးဖြင့်နှလုံးသွေးကြောချဲ့ခြင်း - မျက်လုံးခြယ်သခန့်အရေပြားများအတွက် Fotona 4D လေဆာတင်းကျပ်နှင့်အရေးအကြောင်းတွေလျှော့ချရေး - မွေးကင်းစကလေးများအတွက်အထူးကြပ်မတ်ကုသခြင်း - ရင်သားနို့သိုလှောင် - လက်ခွဲစိတ်ကုသ - လည်ပင်းရိုးဆက်ချပ်ပြားဝိုင်းအတုထည့်ခြင်း - လေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ် - သားအိမ် Embolization - သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးခြင်း - သားအိမ်ထုတ်ခြင်း - သွေးကျဲစေသည့်ကုထုံး - သွေးကြောကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကုသမှု - ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး (HRT) - အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း (အစာအိမ် မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း) - အဏုစိတ်ရိုးဆက်ချပ်ပြားဝိုင်းခွဲစိတ်ခြင်း (Microdiscectomy) - အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ခါးရိုးဆစ်ရှိ ရိုးဆက်ချပ်ပြားဝိုင်းခွဲစိတ်ခြင်း (Endoscopic Lumbar Discectomy) - အနီးကပ်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး (Brachytherapy) - အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ - အပြီးအစီးမျက်လုံးစာမေးပွဲ - အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း - အရိုးလွှာဖြတ်ထုတ်ခြင်း (Laminectomy) - အရေပြားတွင် အပေါက်ငယ်လေးများဖောက်ပြီး ခါးရိုးဆစ်တွဲဆက်ခြင်း (Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Solutions - အသည်းမာကျောမှုစစ်ဆေးခြင်းစကင် (Fibrosan) COSMETIC PROCEDURES - Post ကိုကင်ဆာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး - Rhinoplasty (နှာခေါင်းခွဲစိတ်ကုသ) - တိုးပွား - Rhinoplasty (နှာခေါင်းခွဲစိတ်ကုသ) - လျှော့ချရေး - ဆေးရောင်စုံစက္ကူ-Specific လေဆာကုသမှု - Abdominoplasty (Tummy Tuck) - Blepharoplasty (မျက်တောင်ခွဲစိတ်ကုသ) - Breast Reduction (Reduction Mammoplasty) - Carbon Dioxide Laser Treatment - Dermabrasion (Tattoo Removal) - Face Lift (Rhytidectomy) - Facial Bone Reconstruction - Facial Implants - Filler Injections - Gynecomastia (အမျိုးသားရင်သားလျှော့ချရေး) - Laser Resurfacing - Liposuction - Liposuction (Abdomen) - Liposuction (Arms) - Liposuction (Both Thighs) - Maxillofacial Reconstruction - Non-Ablative Laser Resurfacing - Otoplasty (နားခွဲစိတ်ကုသ) - THERMAGE® - ကလေးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး - ချင်းပြည်နယ်တိုးပွား - ခြယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရှိရပါသည် - ဆံပင်အစားထိုး - နဖူးကြွ (နဖူးဓာတ်လှေကား) - မလိုချင်တဲ့ Tattoo ကုသမှု - ရင်သားကင်ဆာတိုးပွား - ရင်သားကင်ဆာဓာတ်လှေကား (Mastopexy) - ရင်သားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး - ရီဖိုင်းခြေထောက်နဲ့သွေးပြန်ကြောကုသမှု - ရှုံ့ကုသမှု - လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး - အမာရွတ်မျာ
.jpg, .png, .pdf, - ဖိုင်ဆိုဒ်5MB ထက်မကြီးရ
မျိုးရိုးအမည် (ရှိပါက) *
အောက်ပါတို့အား သဘောတူညီပြီး ယခု စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပုံစံကို ပေးပို့ပါသည်။
၁။ ဘမ်ရွန်ဂရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးမှပေးသော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်အငြင်းပွားမှု သို့မဟုတ် လျော်ကြေးတောင်းဆိုခြင်း (ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတွက် နစ်နာကြေးအပါအဝင်) ကိုမဆို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်သဘောတူညီမှုမရနိုင်ပါက ထိုင်းဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်တော်သော ထိုင်းတရားရုံး၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် တစ်ခုတည်းသာ အကျုံးဝင်ပါမည်။
၂။ ခန့်မှန်းချေ ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် သိရှိရန်အချက်အလက်
များ သို့မဟုတ် မည်သည့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များမဆို စုံစမ်းမေးမြန်းသူအတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားသူများမှ ယခုအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီး တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ကိုးကားခြင်း ပြုလုပ်၍မရပါ။
၃။ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ခန့်မှန်းချေကုန်ကျစရိတ်များသည် လူနာ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အပြောင်းအလဲကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကြိုမမြင်နိုင်သော အရာများကြောင့်သော်လည်းကောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။